Nzira Yokusarudza Midziyo, Packs uye Bhegi-Nhau-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Maitiro Ekusarudza Mutoro, Mapakeji uye Mabhegi
Kuva nerudzi rwakakodzera rwemikwende, kurongedza kana bhegi parwendo rwako kunogona kuita kurongedza nekusvetuka mundege kana kurova mugwagwa nyore uye kusanyanya kunetsa. Asi uine akawanda masitayera aunosarudza kubva, kusarudza kuti ndeipi yakakunakira iwe zvinogona kunetsa. Ichi chinyorwa chinopaza mhando dzakasiyana dzemikwende uye chinopa kuraira pakusarudza saizi chaiyo, huremu uye nhanho yekugara. Iyo zvakare inoenda pamusoro pezvimiro zvakaita semavhiri, malaptop compartments uye kutakura-kuenderana.
Mhando dzeMutoro, Mabhegi uye Mapakeji
Pane zvikamu zvitatu zvakakura zvemikwende: mukwende wemavhiri, mapakeji ekufambisa uye mafambiro ekufamba. Paunenge uchisarudza kuti ndeipi yakakunakira iwe, zvinogona kubatsira kufunga nezve zvinhu zvakaita sekuenda kwauri kuenda, kwauri kuenda ikoko uye zvaunoronga kuita kana wasvikako.
Mukana uri pachena wemikwende, mapaketi uye mabhegi ane mavhiri ndeyekuti zviri nyore sei kutakura kuburikidza nendege uye nemigwagwa yakatsetseka nemigwagwa. Kune matatu marudzi emidziyo yemavhiri: kutenderera mukwende, mavhiri duffels uye mavhiri mabhegi.
Kutenderera mukwende: Yakagadzirirwa vafambi vechinyakare, kutenderedza mukwende ndizvo zvaunoona vanhu vazhinji vachidhonza kumashure kwavo kunhandare yendege. Ivo vanouya muhukuru hwakasiyana uye kazhinji vanoratidzira kuvaka kwakasimba kunoitwa kubata kuomarara kwemasisitimu ekutakura mukwende. Ivo anowanzo kuve akanakisa pakufamba kwebhizinesi, kushanya kwemhuri, nzendo dzemumugwagwa uye kuenda kunzvimbo dzemadhorobha.
Mavhiri duffels: Hapana chinomedza giya senge duffel bhegi, uye rimwe rine mavhiri isarudzo yakanaka kune vafambi vemultisport. Kana mavhiri ako achiwanzoda magiya ehukuru hwakasiyana saizi uye maumbirwo, iyo inotenderera duffel inzira yakanaka yekugadzirisa zvese. Kune mapakeji akareruka, inotakura-ine mavhiri duffel inopa mashoma nzvimbo asi inokutendera iwe kurega iyo nguva uye mari yekutarisa bhegi. Mavhiri duffels isarudzo yakanaka yekushanya kwekushanya inoda giya rakakura kana risinganzwisisike, nzendo dzemhuri uye nzendo dzemumugwagwa. Kuti udzidze zvakawanda nezve duffel sarudzo, verenga nezve mafambiro madhiraivha pazasi.
Mabhegi mabhegi: Yakakurumbira nevafambi vekunakidzwa, izvi zvinobatanidza kuve nyore kwemikwende yemavhiri nekufamba kwehombodo. Iwe unokwanisa kutakura akawanda magiya nekungodhonza kuri nyore kwekuwedzera ruoko. Kutarisana netsoka dzinorema netsoka kana nendege refu yekukwira Sungira pamapfudzi emabhanhire uye bhandi rehudyu kwemaoko-emahara kutakura nyore. Mabhegi mabhegi anowanzo kuve akanakisa pakufamba kwekushanya uye nzendo dzemumugwagwa. Kuti udzidze zvakawanda nezve mabhegi, ona chikamu chemapakeji ekufamba pazasi.
Izvi zvinobva pane zvakakosha duffels zvaunokanda pamusoro pefudzi kuenda kune mavhiri duffels ane anokwenenzverwa mabato (kuti udzidze nezvemavhiri duffels, ona iyo Wheeled Luggage chikamu chechinyorwa chino.) Chinhu chekutanga mukana we duffels pamusoro pedzimwe sarudzo ndiwo maitiro avo akareruka. Iwo ari nyore kushandisa uye kazhinji anoratidzira imwe huru nzvimbo yekutakura magiya ako uye zvipfeko. Ehezve, izvi zvinogona kuve zvakaipira kana iwe uri wepamusoro-wakarongeka mhando uyo anoda akapatsanurwa homwe uye makamuri kuti ugare wakadzikama. (Imwe nzira yekugara wakarongeka mu duffel kurongedza zvinhu zvako mumabhuru ekufamba kana masaga ezvinhu.)
Mabhegi eDuffel anowanikwa mune hukuru hwakawanda, kubva kumabhegi akatakurwa-ane mabhegi anokwana makumi maviri kusvika kumakumi matatu emalita uye anozobata mbatya dzekupera kwesvondo kusvika kumahombekombe makuru anobata marita zana kana kupfuura ezviitiko zvinoda matani egiya.
Chinyakare mabhegi emabhegi asina mavhiri anogona kuita kunge echinyakare akapihwa mashandisiro anoita mavhiri kutakura. Asi, yezviitiko zvekuenda kunzvimbo dziri kure nemabhomba, migwagwa isina tara, mavhiri anozonetsa kupfuura iwo akakosha, uye ivo vanowedzera mapaundi akati wandei pahuremu hwese hwehombodo. Haisi chete echinyakare duffels akareruka, iwo zvakare anoteedzana kupfuura iwo ane mavhiri, zvichivaita kuti zvive nyore kuputira mumashure emotokari, kutakura pamatanda edenga kana tambo kune mhuka yekurongedza. Aya ma duffel zvakare zvakareruka kuchengeta (hapana akaomarara mativi, saka anopeta mudiki) uye kazhinji anodhura. Iyo sarudzo huru kune vanokwira, vafambi vekunakidzwa uye vanhu pane bhajeti vanoda kukwevera akawanda magiya.
Aya mabhegi-ane hushamwari ekufamba-famba anokunda uko mikwende yemavhiri isingakwanise: pamatombo, mumigwagwa yemabwe, masitepisi uye imwe nzvimbo isina kuenzana. Mapakeji ekufambisa akafanana nemamwe mabhegi maererano nemaitiro aunoapfeka nerutsigiro rwavanopa, asi vane maficha-akasarudzika maficha, senge homwe dzesangano, mabhandi ebhande uye mabhanhire epafudzi, uye zvakavakirwa-mukati zvekuchengetedza, senge zipi dzinokiyiwa. Ivo akakodzera kune vafambi vanoda kuve vanofamba kwazvo uye vakanaka nekutakura zvese zviri kumusana kwavo.